Ity ny fanambarana fampiroboroboana vaovao an'ny Super Mario Run | Vaovao IPhone
Raha misy lalao iOS iray andrasan'ny rehetra amin'ity volana desambra ity dia Super Mario Run. Ny andiany iPhone an'ny plumber malaza an'i Nintendo dia ho tonga amin'ny andro 15 manaraka amin'ny fanombohana izay manomboka ampangaina amin'ny resabe. Mampitony ny fanahy sy mampiakatra ny natrehin'ireo Talohan'ny famoahana tsy ho ela, ny orinasa dia nandefa doka vaovao hampiroborobo ny famoahana ilay lalao video.
Doka izay ahitantsika olona isan-karazany mihazakazaka amin'ny toerana samihafa eran'izao tontolo izao, manao ny sasany amin'ireo fihetsika mahazatra an'ny Super Mario, ary niafara tamin'ny nitarihany ny vahoaka ho amin'ilay sainan'ny angano ankehitriny.
Como efa nilaza taminay izahay omaly, ny lalao dia hitaky fifandraisana Internet maharitra, hetsika izay, hoy izy, izay hanampy amin'ny fitazonana ny lalao tsy hanao piraty. Na izany aza, ity dia mety ho olana goavana ho an'ireo izay voafetra be ny fifandraisana na izay tsy avelan'ny tahan'ny angon-drakitra hampihena azy io. Etsy ankilany, ho maimaim-poana ny lalao amin'ny fividianana in-app, fa ilaina ny famoahana eo amin'ny 10 euro eo raha te hilalao ny kinova feno tsy misy olana isika. Vidiny izay heverin'ny maro ho lafo amin'ny lalao smartphone.
Raha tsapanao fa afaka izany ny hozatrao ary tsy afaka maharitra hatramin'ny faha-15 ianao hanandrana azy amin'ny fitaovanao, ampahatsiahivinay anao fa ny lalao dia azo alaina amin'ny kinova fitsapana azy amin'ny vokatra fampirantiana ireo magazay Apple samy hafa manerantany. Any ianao dia afaka mijery ny lalao voalohany ary manomboka manazava ny hevitrao momba ny vidin'ny lalao. Vitsy ny sisa tavela amin'ny ho fandefasana lalao iPhone farany amin'ny 2016, ary azonay antoka fa ny Super Mario Run dia ho iray amin'ireo izay hanome be resaka mandritra ny volana ho avy.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » Fampiharana iPhone » Nintendo dia nanangana ny hype ho an'ny Super Mario Run miaraka amin'ity fanambarana vaovao ity
Martin Galindo dia hoy izy:
Oooooh !!!! Tsara !! Tiako hivoaka IZAO !!
Misaotra anao! 😀
Valiny tamin'i Martin Galindo
Tsy azoko hoe ahoana no ahafahan'izy ireo manome fanambarana be dia be amin'ny lalao RUN… .. Tiako i Mario Bros, saingy ity lalao ity, herinandro iray ary ho adino izany, tsy azoko hoe ahoana no tsy ahafahan'izy ireo mamoaka maimaim-poana Mario Bros! Damn, izany lalao maimaim-poana maharikoriko izany .. eny an-dalana ho an'ireo izay tsy mahalala, dia tsy maintsy mandoa € 10 mba hilalaovana ny dikanteny Run tanteraka
Ny zava-misy tsy afaka milalao tsy misy fifandraisana Internet dia midika fa tsy heveriko akory ny mety hividianana azy. Asa tsara! € 10 nohazoniko! Ekeko ihany koa fa vidiny MAFY ho an'ny lalao RUN io
NoATWAKEUP, tweak izay hamonjy bateria amin'ny iPhone-nao